Ị maara otú e si enweta redlinks ngwa ngwa dị ka o kwere mee?
Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụla ịsị na backlinks na-eme ka ụwa nke ọchụchọ enyocha gburugburu. O doro anya na otu nchịkọta njikọ ị na-arụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog bụ nke a chọtara n'etiti atọ kachasị elu nke ihe ndị Google weghaara na akaụntụ mgbe ọ na-abịa nyochaa nhazi ọkwá dị mma na nchịkọta ọchụchọ. Ya mere, ọ ga-abụ mkpebi amamihe dị na ya iji nlekọta ọ bụla dị na profaịlị gị - na-eme nchọpụta nhazi iji chọpụta nsogbu ọ bụla metụtara, dịka njikọta agbajiri, redirects na-ezighị ezi, ma ọ bụ Chineke na-egbochi, njikọ na-egbu egbu nke nwere ike ibibi kpamkpam nsogbu nsogbu gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ngwa-edozi oge. Kedukwanụ banyere ụfọdụ n'ime backlinks kachasị dị oké ọnụ ahịa gị si n'aka ọkachamara PR na ikike? Dịka ọmụmaatụ, chee, na ị nwetalarị njikọ abụọ dị otú ahụ n'oge na-adịbeghị anya, ma gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na akwụkwọ ndị ọzọ nke atọ agaghị anọgide na-edekọ aha? N'ebe a ka emesị bụrụ ihe doro anya - anyị kwesịrị ịma otú e si enweta azụlinks ngwa ngwa, ngwa ngwa, ngwa ngwa o kwere omume. Ka anyị chee ya ihu - ị gaghị enweta ọtụtụ n'ime "ihe njikọ njikọ" ma ọ bụrụ na ọ dị ka ihe ọ bụla adịghị ka edere aha ya ugbu a - coast purple fascinators. Ma, esi enweta ngwa ngwa backlinks ngwa ngwa, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala, anyị nwere ike ịhụ ha na-enweghị ikike nnweta onye nwe - nyere na a pụghị ịchọta ha na saịtị gị, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla n'ime ọdịnaya gị?
Otu esi enweta ngwa ngwa backlinks ngwa ngwa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa mee ka usoro ahụ megharịa.
N'iburu n'uche na ọ bụghị njikọ niile ejikọtara ya na ya, ihe mbụ a ga-eme ebe a bụ ịlele ebe ha si enweta ya. Echere m na tupu egosipụtara gị otu esi enwetaghachi azụ azụ dịka o kwere mee, ị ghaghị ịma ma mgbalị ahụ n'onwe ya bụ onye ruru eru. Ya mere, gịnị mere ị ga - eji mebie oge gị ma ọ bụrụ na ejikọtara gị na ọnọdụ? Ma ọ bụ ị nwere ike na-eche ihu na-egbu egbu njikọ, dịka ọmụmaatụ mgbe ọ na-abịa saịtị na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ n'ihu ọha scammy na-ekwu banyere ihe ndị dị otú ahụ imebi isiokwu dị ka ọgwụ, ịkwa iko, ma ọ bụ ịgba chaa chaa. Eleghi anya ị ga-akasị mma ị ga-ekpochapụ njikọ ndị na-emerụ ahụ, kama ịgbalị ịzọpụta ha, nri?
Ugbu a, ọ bụ oge iji nwaa ịnye njikọ njikọ URL na Google. Ihe niile dị nnọọ mfe ebe a - enwere ụdị nke search engine chọrọ. Ị nwere ike jupụta ya iji nweta ụfọdụ ibe weebụ wepụtara na ndepụta. Naanị gafee usoro - na ịmeela. Akwukwọ a, yana njikọ ya onwe ya, ga-edeputa ya ngwa ngwa karia ka odi.
Ụzọ nke abụọ iji meziwanye usoro ntinye aha Google maka njikọ bụ iji netwọk mmekọrịta iji mee nke ahụ. Mụ onwe m, Twitter bụ ụzọ dị mkpa ọ bụghị nanị iji nweta ngwa ngwa na ndepụta ngwa ngwa kama iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, tinyekwuo okporo ụzọ na ibe weebụ na-egosi gị njikọ, yana ịchọta onye nwe isi iyi na-egosi na i nwere ekele na-ejikọ ya. Cheta, Otú ọ dị, tweeting njikọ na-arụ ọrụ nke ọma na obere / moderate ọnụ ọgụgụ. Ị gaghị achọ iji oge dị ukwuu mee usoro ahụ, dịka ọmụmaatụ na otu narị njikọ, nri?